Ejipta · Avrily, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Avrily, 2011
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Avrily, 2011
Fahalalahàna miteny 30 Avrily 2011
Iraka: Mbola Velona ve i Saddam?
Arabia Saodita 30 Avrily 2011
Naparitak'i Saddam Hussein eran'ny valan-tserasera, tamin'ny alalan'ny fitaovana fandraisam-peo izay milaza fa mbola velona ny mpanao didy jadona Irakiana fa ilay olona mitovy be aminy Mikhail no any tokana notapahan-doha tamin'ny 30 Desembra 2006. Marobe ireo mpiserasera nihevitra ny horonantsary ho lainga ary mampanantena ireo mpijery izany fa efa maty sy nalevina i...
Tontolo Arabo: Tazon'ny Fampakarambadin'ny Mpanjaka No Rivotra Iainana
Angletera 29 Avrily 2011
Tonga hatrany Afovoany Atsinanana ny dobok'ampongan'ireo mpampita vaovao manodidina ny fampakarambadin'ny mpanjaka ho an'ny Printsy William sy Catherine Middleton rahampitso (29 Aprily), somary naka aina kely amin'ny fandrakofana ny fitroarana mitranga any amin'ny tontolo arabo ireo mpibitsika mba hanamarika ity lanonana sy fandraisana vahiny izay harahana avy ao amin'ny Lapan'ny Buckingham ity.
Ejipta: Gigi Ibrahim Tao Amin'ny The Daily Show
Amerika Avaratra 27 Avrily 2011
Ny fisehoan'ilay Ejiptiana mafanà fo ara-politika sady mpandefa bitsika, Gigi Ibrahim, tao amin'ny The Daily Show, dia nahatonga onjam-panohanana sy fanoherana avy amin'ireo namana mpandefa bitsika, izay nandrakotra ny revolisiona ejiptiana. Indreto fanehoankevitra vitsivitsy avy ao amin'ny Twitter.
Ejipta: Mitolona Ho An'i Siria
Libia 27 Avrily 2011
Maro ireo Ejiptiana niaraka tamin'ireo mpianatra Siriana izay nitangorona nanoloana ny masoivoho Siriana tao Caire ho fanoherana ny famonoana mpitolona, ary niantso ho an'ny fiongananan'ny fitondràna Siriana entin'i Bashar Al Assad. Nihirahira ho firaisankina amin'ireo mpanao fihetsiketsehana Siriana ny mpitolona ary nivavaka ihany koa ho an'ireo namoy ny ainy nandritra ny tolona.
Ejipta: Nampianatra Antsika Ny Fomba Hikomiana i Gene Sharp!
Ny Febroary lasa teo, Sheryl Stolberg ao amin'ny The New York Times dia nanoratra lahatsoratra momba ilay mpampianatra siansa politika, Gene Sharp, izay nolazainy fa ny hevitr'io mpampianatra io no nitarika nofinofim-pitakiam-piovàna Ejiptiana, tahaka ireo fikomiana maro hafa tany amin'ny faritra.Namaly izany filazana izany ireo mpampiasa aterineto Ejiptiana miaraka amin'ny tenifototra ao amin'ny Twitter.
Tontolo Arabo: momba ny Revolisiona sy ny Kapitalisma
Fanoherana 24 Avrily 2011
Nandritra ny andro vitsivitsy, naparitako indray ny hevitra mamirapiratr'i @_Capitalism_ mpisera ao amin'ny Twitter. Indreto misy eritreritra sendra nandalo resahiny momba ny revolisiona arabo.
Fahalalahàna miteny 23 Avrily 2011
Fanoherana 21 Avrily 2011